Garlic | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Technology nke na-akụ garlic maka oyi
Garlic bụ osisi perennial. Ọ bụrụ na ị kpebie ịkọ oyi garlic, ọ kachasị mma ilekọta nke a na ọdịda. N'ịbụ onye kụrụ osisi bulbous a site n'oge oyi, afọ ọzọ ị ga-enweta garlic nke mma na ogo dị mma. Ị ma? Garlic enwetawo nnukwu ewu ewu ma nwee ihe karịrị 70.
N'ezie, onye ọ bụla site n'oge ọ bụ nwata maara na garlic bụ dọkịta dị mkpa, karịsịa n'oge oyi. A sị ka e kwuwe, ọ bụ n'oge a ka nkwenye mmadụ na-adịghị ike. Ya mere, a na-atụ aro onye ọ bụla iji garlic maka mgbochi. Ma ọ dịghị onye na-eche na nsogbu site na galik pụkwara ịdị ịrịba ama. Enwere ike ikwu na isi ya enweghị garlic.
Ihe dị iche iche nke garlic: mejupụtara na uru bara uru
Mmetụta mbụ ọbụlagodi na ịkpọ garlic bụ ísì ya (sitere na oghere sulfuric). Ụfọdụ ndị na-amasị ya, ndị ọzọ adịghị. Ma isi nke galik bụ ihe dị na ya, mana uru galik (uru ya) bụ ihe doro anya na nke bụ eziokwu. Ka anyị leba anya na eziokwu a site na iche iche echiche. Ihe oriri bara uru nke galik Na tebụl anyị, garlic dị n'ụdị atọ: nke ọhụrụ, na ntụ ntụ, nakwa n'ụdị nku uhie.
Oge kacha mma ịkọ osisi garlic, ma ọ bụ mgbe ị ga-akụ garlic
Garlic dị oké mkpa maka ọtụtụ efere nke anyị maara, marinades, na canning anyị, ha na-ejikwa ya maka ọgwụgwọ na igbochi oge oyi. Enwerekwa ọtụtụ ntụziaka maka ọgwụgwọ ọdịnala iji meziwanye ọgụ, melite ọrụ obi, sachaa na rejuvenate ahụ. Ọ bụghị ihe ọjọọ maka nzube ndị a niile ka ị na-etolite n'ihe ndina gị, ma ịzụtaghị garlic.
Garlic juru maka oyi, otu esi echekwa garlic na oyi
Na-adighi nma piquant ma na-ere ọkụ, nke na-egosi ihe na-esi ísì ụtọ na uto pụrụ iche - ndị a bụ akwụkwọ ndị kachasị akọwa galik. Ị nwere ike izute ngwaahịa a kpamkpam n'ụlọ ọ bụla, ma ọhụụ ma dịka akụkụ nke oge dị iche iche, ejiji na blanks. A ma ama garlic, nke mere na onye ọ bụla na-achọ okpomọkụ na-achọ ọ bụghị nanị ịkụ mkpụrụ n'ubi ya, kamakwa ịme ihe ubi maka oge oyi, mgbe garlic ọhụrụ ghọrọ ezigbo nri.
Ihe Nlekere Achịcha: Otu Ahịa Dị Mma Ka Irite Uru
Akwukwo garlic na ahihia nke garlic, nke eji eji ya kwadoro sayensi, abughi nani ihe oriri, kamakwa dika ogwu. Garlic na abamuru ya maka ahụ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị nile nke ụwa. Na mba dị iche iche, e mewo ya nke ọma maka ọgwụgwọ na ọgwụgwọ kemgbe oge ochie. Garlic na-eje ozi dị ka ihe ọzọ na-eme ka ụfọdụ ndị na-egbochi ọrịa ahụ, na-eme ka nchebe na-egbochi ahụ ike ma na-egbochi oyi, ọrịa obi, ọrịa ịrịa ọrịa.
Nhọrọ kacha mma maka owuwe ihe ubi akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ maka oyi
Taa, ụmụ nwanyị nwere ahụmahụ ejiriwo ọtụtụ ụzọ iji chekwaa akwụkwọ nri n'oge oyi. Na garlic abụghị naanị, n'ihi na garlic na-ekpo ọkụ na-ejide ihe niile bara uru, ya uto na okpukpo. Chekwa ya na oghere friza nke refrjiraeto. N'isiokwu a, anyị ga-akọwa otu esi enweta garlic maka akwụkwọ oyi.
Osisi na-eto eto: kụrụ ma lekọta ubi
Ọtụtụ n'ime anyị na-eji galik maka nri nri ma ọ bụ ọbụna ọgwụgwọ, mana ole na ole maara ụdị ọdịbendị dị iche iche. Ọ bụ nke osisi herbaceous nke ezinụlọ Onion, ọtụtụ ndị na-elekọta ubi na ndị mbụ na-eto eto na-eto eto nwere ike jiri nwayọọ na-atụgharị ya na ahịhịa ma wepụ ha n'àkwà ahụ, si otú a na-eme onwe ha ka ha ghara inweta vitamin.
Na oge opupu ihe ubi na saịtị ahụ, ọtụtụ ndị bi n'oge okpomọkụ na-enwe iwe na-ahụ akwụkwọ yellowed nke garlic. Nke a abughi nani ihe na-adighi nma, ma o bukwara ihe omuma atu na ugbua ugbo nke na-eto eto oyi garlic agbajiri. E kwuwerị, na-eso yellowing nke epupụta, osisi ahụ na-akwụsị na-eto eto kpam kpam, na cloves na-ere. Gịnị mere oyi garlic ji atụgharị edo edo na mmiri na ihe ị ga-eme, anyị na-atụle n'isiokwu a.
Esi esi nri garlic na eyịm na amonia
Anyị na-echekarị banyere amonia, ọgwụ na-eji mee ka onye dara mbà gbakee maka ịgwọ neuralgia, myositis, na ịmalite ịme agbọ agbọ. Ma, ọ na-apụta na iji amonia na ubi nwere ike - karịsịa, maka ịgbara na spraying bulbous kụrụ: garlic na eyịm.
Kedu ụdị garlic kwesịrị kụrụ tupu oyi: ụdị dị iche
Garlic bụ osisi nke ezinụlọ Amarallis. Nke a bụ otu n'ime ihe ọkụkụ na-emekarị ihe oriri n'ụwa. A na-eji ya eme ihe dị ka nri na ọgwụ. Kwa afọ, a na-egbute garlic karịrị kilogram 17 nde n'ụwa. A pụrụ ịkọ ihe oriri a n'oge ọ bụla n'afọ. N'isiokwu a, anyị ga-enyocha nyocha niile nke oyi garlic (tinyere foto).
Iche iche nke mmiri garlic maka ìgwè dị n'etiti
Isiokwu a ga-aba uru nye ndị na-agba galik ma chọọ ịmalite osisi a bara uru dị n'ubi ya. N'ime ya, ị ga-ahụ ndepụta nke ụdị mmiri garlic nke kachasịsị na ya na foto na nkọwa nke ga-enyere gị aka ikpebi ụdị osisi nke kwesịrị gị.
Mgbe na otu esi eweputa garlic garlic n'oge kwesịrị ekwesị
Garlic bụ onye ọbịa na-eri ugboro ugboro na tebụl, karịsịa na oge oyi-oge oyi. N'ịbụ onye na-esi ísì ụtọ na ísì siri ísì, garlic bụ ihe dị mkpa n'ime ihe oriri anụ, sauces na salads. Garlic bụ oyi na mmiri. Ọ dị mfe ịmata ọdịiche dị iche iche ndị a dị iche iche - e nwere 5-6 cloves n'isi oyi garlic, ma na etiti e nwere ụgha ụgha, n'isi isi mmiri garlic nwere ọtụtụ cloves (10-20 iberibe), ọ dịghị ugha ụgha.
Esi echekwa garlic ke ini etuep
Ọtụtụ ndị na-akọ ubi na-akụ galik n'ógbè ha, mgbe oge owuwe ihe ubi na-abịa, ajụjụ ahụ na-ebilite banyere nchekwa ya. N'isiokwu anyị, anyị ga-akọwa otú ị ga-esi na-echekwa garlic maka oyi na ụlọ ka ọ ghara ịkọ, tụlee ụzọ dịgasị iche iche iji chebe ya. Owuwe ihe ubi Owuwe ihe ubi maka iwe ihe ubi maka oyi kwesiri ime ya n'oge.
Kedu ka esi esi etinye mmiri garlic na ugboro ole?
Ndị ọkachamara ahụmahụ maara: ọ bụrụ na ịhazi usoro ubi gị nke ọma, ị gaghị enwe ike ịzọpụta mkpụrụ toro eto na mkpụrụ sitere n'ọtụtụ nsogbu, kamakwa ọ ga-eme ka ọnụ ọgụgụ owuwe ihe ubi n'ọdịnihu dịkwuo elu. Taa, anyị ga-ekwu banyere omenala nke chọrọ ka moistening, bụ nke sitere na okike nwere ike ịmalite mgbọrọgwụ ma chọọ nnukwu mmiri mmiri n'oge oge pụrụ iche nke mmepe.
Anyị na-enyocha okwu nke ịkọ garlic
Osisi osisi nke na-enye anyị ọtụtụ vitamin n'oge okpomọkụ na n'oge oyi. Iji na-eto eto garlic na ubi gị, na-akụ n'elu ha maka oyi, ịkwesịrị ịma ihe ndị dị mkpa: ebe, oge na ọnọdụ nke akuku. Gbasara ndụmọdụ ọzọ, ma ị nwere ike ịzụta ihe ubi maka afọ.
Lee ka galik a ṅara n'ọkụ na otú e si esi mee ya
Garlic nwere ogologo oge ma guzosie ike dị ka ihe dị iche iche maka ihe ụtọ anụ ọhịa dị iche iche nke ndị nnabata nke ala anyị. Ma, ndị mmadụ ole na ole maara ụdị ihe bara uru ma na-emerụ emerụ nke garlic chara acha na-ezobe n'onwe ya. Ka anyị leba anya na nke a. Achịcha Achịcha: Ụdị na Ahụhụ .
Garlic "Lyubasha": atụmatụ nke dịgasị iche iche na ịkọ ihe
Ọtụtụ ndị na-elekọta ubi na-ahọrọ galik. A sị ka e kwuwe, ha dị n'isi ụtụtụ, ma ọ bụghị na ha na-enye nnukwu ihe ubi. N'etiti ndị a dị iche iche na-akọwa ọdịiche dị na garlic "Lyubasha", nke nwere ọtụtụ uru, nke mere na ọ na-eduzi n'etiti ndị ọrụ ubi. Nkọwa dịgasị iche iche "Lyubasha" - Ukraine ozuzu, ma ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị maka ịkọ ọ bụghị nanị na Ukraine, kamakwa na Russia, Belarus, Moldova.
Mgbe na otu esi akụ osisi garlic na Siberia: ndụmọdụ bara uru
O doro anya na Garlic bụ otu n'ime ihe oriri ndị a kasị mara amara nke ụmụ mmadụ na-akọ. Ọ dịwo anya a mara maka ọmarịcha uto na ọgwụgwọ ya. Ihe omuma a bu ihe di iche iche nke akuku oyi na Siberia. Nke kachasị mma n'etiti ndị ọrụ ugbo Siberia: "Alkor" bụ ihe dị iche iche na-edozi ahụ, isi bụ pink-acha odo odo, ịdị arọ ya ruru 35 g, uto dị mma, mkpụrụ siri ike, ụdị dịgasị iche iche nwere ike ịdaba na virus dwarfism; "SIR 10" bụ ọtụtụ n'ime égbè dị iche iche, isi ya bụ violet nke ọma, ịdị arọ ya ruru 30 g, ọnyá siri ike, ụdị dịgasị iche iche na-eguzogide ọrịa, ma mgbe ụfọdụ, ọ na-enwe ike ịdaba na nje bacteria; "Skiff" bụ okpukpu abụọ n'etiti agha, isi ya na-acha ọcha na ndo lilac, ibu ya nwere ike iru 30 g, uto dị egwu, ụdị dịgasị iche iche na-eguzogidekarị ọrịa, ma ọ bụ mgbe ụfọdụ, bacteriosis na ire ọcha na-emetụta ya; "Oge mgbụsị akwụkwọ" bụ ụdị ụtụtụ na-acha ọcha, isi ya na-acha ọcha, ma o nwere lilac ma ọ bụ odo odo, nke ahụ nwere ike iru 40 g, uto osere, na-eguzogide ọrịa; "A pụrụ ịdabere na ya" dị iche iche dị iche iche, isi ya na-acha ọcha na ndo lilac, ịdị arọ ya ruru 70 g, uto anụ ahụ, na-eguzogide ọrịa, n'etiti atụmatụ ndị dị mma, nke na-enye gị ohere ịchekwa ihe ubi ahụ ruo ọnwa 11.
Mgbe na otu esi akụ osisi garlic na Ukraine
Ukrainians hụrụ garlic. Ha na-agbakwunye ya n'ọtụtụ efere, nkwadebe maka oyi, rie obere shuga na borscht. A na-ejikwa ya maka igbochi na ọgwụgwọ oyi na ọrịa na-efe efe. Ya mere, ọ na-etolite n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ atụmatụ ezinụlọ ọ bụla. Tụlee aro bara uru banyere esi akụ osisi garlic.